Fotodrafitrasa fampandrosoana: vita ny 66% amin’ny lalana Marovoay/Amboasary RN44 | NewsMada
Fotodrafitrasa fampandrosoana: vita ny 66% amin’ny lalana Marovoay/Amboasary RN44
Miroso tanteraka ny asa na nisy fahatarana aza. Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny lalam-pirenena RN44 ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MaTP), Andrianainarivelo Hajo, sy ny avy amin’ny Banky iraisam-pirenena, i Uwanyiligira Marie Chantal, ny zoma teo.
Nivoitra tamin’izany fa manenjika ny fahatarana noho ny hamehana ara-pahasalamana ny orinasa misahana ny fanamboarana ny RN44. “Efa mananika ny 66% ny fandroson’ny asa ho an’ny dingana voalohany ary efa miroso tanteraka ny asa. Tsy maintsy hajaina ny fitsipika rehetra, toy ny lafiny tontolo iainana sy ireo olona voakasiky ny tetikasa ka ho tratra mialoha ny faran’ny taona ny fanajariana “terrasement” ho an’ny tapany faharoa”, hoy ny minisitra.
Naneho ny fahafaham-pony amin’ny asa sy ny kalitaony kosa ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena. “Miantoka ny fiovana eo amin’ny toekarena sy ny fiharian’ny vahoaka ny fahavitan’ny lalana. Afa-po tanteraka izahay ary mankasitraka manokana ny MaTP sy ny ekipa rehetra ary ny orinasa. Efa nanome toky izy ireo ary naneho fahavonanana ny hanenjika amin’ny fahataran’ny asa”, hoy izy.
Miavaka ny fanamboarana ny RN44
Naneho ny hanohanany hatrany, indrindra ny lafiny vola, ny mpiara-miombona antoka tamin’izao fidinana ifotony izao ary hanampy ho an’ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, anisan’ny avokavoky ny fampandrosoana.
Tsiahivina fa mirefy 40 km izao ampahan-dalana voalohany efa miroso tanteraka izao. Anisan’ny mampiavaka ity fanamboaran-dalana ity ny refin’ny sakany, 7 m. Eo koa ny fiarovana ny sisin-dalana sy ny hateviny. Eo koa ny fanamboarana ny lalana amin’ireo kaominina manodidina ny RN44 ka mahafeno ny fepetra, ahafahan’izy ireo mamoaka ny vokatra.